Al Shabaab oo war kasoo saaray dagaal culus oo ay la galeen ciidamada DANAB iyo Mareykanka – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Al Shabaab oo war kasoo saaray dagaal culus oo ay la galeen...
Al Shabaab oo war kasoo saaray dagaal culus oo ay la galeen ciidamada DANAB iyo Mareykanka
Beegsonews-Wararka ka imaanaya deegaanka Daarusalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in xalay saqdii dhexe dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Daarusalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidamada DANAB oo taageera ka helaya ciidamada Mareykanka ay weerar ku qaadeen saldhiga Al Shabaab ku leeyihiin deegaanka Daarusalaam.
Deegaanka Weerarka uu ka dhacay ayaa qiyaas ahaan 7 KM u jira degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana ciidamada oo wata diyaaradaha dagaalka ay u degteen dhulka, iyaga oo kadib ay halkaasi kula dagaalameen Al Shabaab.
Ma jiro war kasoo baxay dhanka dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidamada Mareykanka, balse Al Shabaab ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ka dhacay deegaanka Daarusalaam ee gobolka SHabeelaha Hoose.
Al Shabaab ayaa sheegay in ciidamadooda ay fashiliyeen weerarka ciidamada ay damacsanaayeen, waxaana ay sheegeen in weerar dhabogal ah iyo qaraxyo ay la eegteen ciidamada isbaheysanayay.
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa weerarka ka dib duqeymo ka fuliyay deegaanka Daarusalaam ee duleedka degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose, sida Al Shabaab ay sheegeen, waxaa duqeynta ku dhaawacmay 2 ruux.
Sanadkii 2017 sidan oo kale ciidamada isbaheysanaya ayaa weeraray deegaanka Daarusalaam ee gobolka Shabeelaha Hoose.
La soco waxii kasoo kordhaa Insha allah.
Previous articleIsreal Oo Basaasta Telefoonada 45 Dal Oo Dunnida Ah
Next articleShirkado hakiyey isticmaalka diyaardda Boeing 737-Max 8